Fadlan Miyaan Ka Wanaagsan Karnaa Suuqgeynteena? | Martech Zone
Fadlan Miyaynu Kaga Fiicnaan Karnaa Suuqgeynteena?
Sabtida, Oktoobar 1, 2016 Douglas Karr
Tani abaalmarinta spoof video waa cajiib. Kaftanka ugu fiican had iyo jeer wuxuu umuuqdaa mid ku qotoma daacadnimo, iyo soo gudbinta abaalmarinta hubaal waa lagu qosli karaa. Anigu ma ihi abaalmarinnada wada-cabira; Waxaan rumeysanahay in aqoonsiga warshaduhu uu yahay mid lama huraan ah. Waxay bixisaa caddeyn ku saabsan awooddaada waxayna dhistaa wacyigelin dhagaystayaasha aadka u khuseeya.
Waxaan leenahay wax aan caadi aheyn wakaaladda xiriirka dadweynaha in aan la shaqeyno. Waxay heystaan ​​gacmahooda nala buuxa, riixaya alaabtayada (daabacaadan) sida khayraad, our wakaaladda suuqgeynta dhijitaalka ah hogaamiye ahaan, Jenn a suuqgeynta MC iyo afhayeenka, iyo nafteyda sida a Hogaamiyaha fikirka suuqgeynta, afhayeenka khudbada suuq geynta, iyo afhayeenka suuq geynta. Waxa ugu weyn ee ku saabsan dadkeena PR waa inay had iyo jeer nagu riixaan inaan kala soocno. is-dallacaad aan xishood lahayn. Ugh.
Waan ka xumahay xariga caajiska ah ee isku xirnaanta is-dhiirrigelinta xishood la'aanta ah. Aniguba dambi baan ahay.
Ma hubo halka khadadka ay ku kala madoobaadeen ego iyo isku kalsoonaanta, laakiin ma sahlana. Inta udhaxeysa daraasadaha kiisaska qasacadaysan ee aad ku xusho kaliya natiijooyinka ugu fiican ee aad ku guuleysatay, ururinta ereyada buzz-ka, daraasadaha kiisaska qasacadaysan - waa wax walba oo la ciil qabo. Hadda waan ogahay waxa ay u eg tahay qoritaanka khudbadaha siyaasadeed, jawaabaha RFP, iyo war-saxaafadeedyada si loo noolaado.
Maanta boorsadaydii schwag waan ka faaruqiyey shir - xeedho taleefan, taleefan dhejis dhejis ah, USB suulka, moleskin, suufka waraaqaha lagu dhajiyo ka dib, iyo furitaanka dhalo biir kale. Jonathan Green, qoraaga Qaamuuska Green ee Slang, ayaa dib loo raad raacay eraygii sagwag, ma rumaysan doontid asalka ereyga:
Marijuana tayo hoose leh ayaa loo yaqaanay ditchweed, schwag, iyo skunkweed.
Marwalba waxaan u maleynayay in schwag ay tahay codka bacda wax duuban la sameeyo markay ku dhacdo hoteelka qashinkaaga. Laakiin maya. Way kasii liidataa… u dhiganta iibinta dheriga waalan. Weligay ma iibin dheriga, laakiin waxaan qiyaasi karaa oo keliya sida loo dhammaystiro shaqadiisa inay noqon karto. Suuq geynta waa in ay ka sii xumaataa.
Waa inaan suuq geynaa nafteena, laakiin maahan inaan u sameyno sida dadka kale.
Waa tan waxa aan ka fikirayo markaan fiiriyo hareeraha warshadeena:
Xaqiiqda ah inaynu sameyno ma naga reebayso inaan asal ahaan noqonno, in kastoo. Ilaahay dartiis, dadweynow, aan xoogaa fikir ah u galino suuqgeena. Ka sooc naftaada asxaabtaada iskana jooji inaad ku dayato.
Hagaag, markani waa marka aad ii kaxaysid magaalada suuqgeyga xariifka ah. 😉
Tags: bandhig abaalmarinabaalmarintanaftaada u calaamadeynegoWaan is jecelahaysuuqgeynta naftaada